You are at:Home»Kachin States»ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကချင် ရခိုင် အရေး. ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ နဲ့ ပင်လုံညီလာခံ – ဆောင်းပါး
"ဘာကြောင့်လဲ နယ်စပ်က ကေအိုင်အေစခန်းလေးတွေ များစွာ ဂိဒေါင်စခန်းအပါအဝင် အင်အားသုံး လေကြောင်းဗုန်းကြဲ သိမ်းပြတာကြောင့်လား . ." . .မေးတော့
" ဒါကြောင့်လဲ မဟုတ်ပါဘူး" . ဖြေတယ်။
" အရင်လက မြန်မာပြည်လုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယန်သင်းအုပ်ဆရာများ ကွန်ဖရင့်မှာ ကချင်ပြည်နယ်က ကချင်သင်းအုပ်ဆရာများ ထပြီး အလွန်မကြေနပ်စွာ ရင်ဖွင့်ကြတယ်။ မြန်မာပြည် အနှံ့က ရောက်လာတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာတချို့ ဘာသာရေးကွန်ဖရင့်မှာ နိုင်ငံရေးအသံ ကြားရတော့ အစိုးရလာဖမ်းမလား စိုးရိမ်ကြသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒို့အားလုံး ကချင်ပြည်နယ် ပြသနာက အရေးကြီးတယ်။ ဝိုင်းဆုတောင်းပေးရမယ် ပြောပြီး ဆုပဲတောင်းပေးကြတယ် ဆိုပဲ။ ဘာပြသနာလဲ ?" . . မေးတော့
"နိုင်ငံရေးပြသနာပဲ" . . လို့ ဖြေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည် တိုက်ပွဲတွေမှာ ဘာသံမှမထွက်ဘူး။ ဒါကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ " . .မေးတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က စစ်တပ်အလိုကျ လုပ်နေရပြီ။ သူက ကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာသိ သြဇာကြီးတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးပါ။ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာတွေအတွက်ပဲ ကောင်းတာပါ။ ကချင်တွေအတွက်တော့ မကောင်းဘူး။ ပိုတောင် ဆိုးလာသလိုပဲ။ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေ ပိုတောင်များလာသေးတယ်". . လို့ ဖြေပါတယ်။
" ကချင်စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အတိုင်ပင်ခံရုံးက ထောက်ပံ့ငွေ သိန်းထောင်နဲ့ချီ တရားဝင်ပေးနေပြီလေ။ စစ်တပ်က သဘောတူလို့ အစိုးရက တရားဝင်ကူညီ နေပြီပဲ။ ၂၀၁၂ သမတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကတည်းက စစ်တပ်လေကြောင်းထိုးစစ် အကြီးကျယ် လုပ်စဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်နေပေမဲ့ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များကို ၃ကြိမ်တိုင် ကျပ်သိန်းရာချီ လှုဒါန်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား " . . လို့
" ဒီအတွက် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဗမာစစ်တပ်သဘောကျ ဖြစ်နေပြီ။ အခုကြည့်သူပါလား . . ဦးကိုနီ မတရား အကြမ်းဖက် လုပ်ကြံခံရလို့ သေဆုံးသွားရှာတာ ဝမ်းနည်းကြောင်း စကားတခွန်းတောင် မပြောဘူးလေ။ ရခိုင်အရေးလည်း ဒီအတိုင်းပဲ . . ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ဘီလျံနဲ့ချီပြီး ရခိုင်တွေ တပြားမှမရဘူး။ အလားတူပဲ ကချင်ပြည်နယ်က ကျောက်စိမ်းတွေလဲ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာဘီလျံ နဲ့ချီပြီးရတာ ကချင်တွေ တပြားမှမရဘူး။ ကေအိုင်အေ ကုန်သည်တွေကို အခွန်ကောက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ကို လျှပ်စစ်ပေးတယ်။ လမ်းခင်းတယ်။ ဒါတောင် စစ်တပ်ကုမဏီတွေနဲ့ အစိုးရ အီးပီစီ က ၂ဆတိုး တောင်းလို့ ပြည်မမှာ လျပ်စစ် တယူနစ် ၃၅ကျပ်. . မြစ်ကြီးနားမှာ တယူနစ် ၃၀၀ကျပ် . . ဒီလိုပဲ ကချင်တွေ အရာရာမှာ အရမ်းနစ်နာနေတာ။ သူလုပ်နေတာတွေက စစ်တပ်လုပ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတာ။ သူခေါင်းဆောင်မဖြစ်ရင် ကချင်ပြည်နည်အတွက် ပိုကောင်းသလိုပဲ" . . လို့ ဖြေပါတယ်။
"ဟာ . မလုပ်ပါနဲ့ . . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင် မလုပ်ရင် ဘယ်သူလုပ်နိုင်မှာလဲ။ ညှိနှိုင်းနေရတာပေါ့လေ။ သူ့လောက် သြဇာရှိတဲ့လူတောင် ငြိမ်နေရတာ ကြည့်ပါ။ မလွယ်တာ ဧကန်ပါပဲ။ ကချင် ရခိုင် အရေးတွေက အလွန်ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးတယ် ဆိုတာပြတာပါ။ မြန်မာစစ်တပ်ကြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှိသလို တရုပ်စစ်တပ်ကြီးလဲ ကချင်နယ်စပ် ယူနန်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတာ သိတယ်မဟုတ်လား. . လို့
" တရုပ်နဲ့ မြန်မာ စစ်အင်အားပြိုင်ချင်သလား . . မြန်မာစစ်တပ်က ဘာလို့တရုပ်ကို ချချင်နေရတာလဲ. . မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဗမာစစ်တပ်ကြီး ရောက်နေတာ ကေအိုင်အေကို တိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကေအိုင်အေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက အားလုံးနီးပါး စစ်ဆက်မတိုက်ချင်တော့ဘူး။ စစ်တိုက်လို့ ကချင်ပြည်နယ် လူထုပဲ နစ်နာနေတာ အခုကြည့်ပါ. . စစ်ဘေးက အိုးအိမ်ပစ်ပြေးရတဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ ၄နှစ်ကျော်ပြီ။ အလွန်ချမ်းအေးတဲ့ ဆောင်ဒဏ်ခံ အစာရေစာလည်း မလုံလောက်။ တရုပ်အစိုးရကလည်း မောင်းထုတ်။ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ကြား မူးရစ်ဆေးဝါး ဆေးပြားနဲ့ ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေကလည်း ဘိန်းဘုရင်တွေ ဝိသမစီးပွားရေးလုပ်ပြန်တယ်။ အခုတော့ ဖမ်းဆီးနေပေမဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့တွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။ အဆုံးသပ်ရရင် ကချင်လူငယ်တွေ ကေအိုင်အေဖြစ်ပြီး သေနပ်ကိုင်နေရတယ်။ ကေအိုင်အေ မဖြစ်ရင် မူးယစ်သားကောင် ကျောက်စိမ်းတွင်းတူးလုပ်သား ပညာမသင်နိုင် . . တရုပ်ပြည်သွားအလုပ်လုပ် . .ချွတ်ခြုံကျနေတာ စစ်ပွဲကြောင့်ပဲ။
ကေအိုင်အေ က စစ်မတိုက်ချင်ပဲ . NCA အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်မထိုးနိုင်ပဲ . . ကချင်ပြည်နယ် ပြည်တွင်း စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်". . လို့ ဖြေပါတယ်။
ကျန်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စိတ်ရှိသူတွေ စစ်ဝါဒီတွေက " ချကွာ ချကွာ. . အမြင်ရှိသူများစွာ တို့နဲ့အတူ သူတို့လည်း" ကချင်ရွာတွေ တခါမှမရောက်ဖူးကြပါဘူး။ ရောက်ဖူးသွားသူများကတော့ အပြတ်တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းဖို့ မလိုလားကြပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိလို့ပါ။
By Witmone on	 April 5, 2017 Kachin States, ဆောင်းပါး